आजको नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, के भयो निष्कर्ष ? – Sawal Nepal ||The Power of Information
आजको नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, के भयो निष्कर्ष ?
पत्रपत्रिका २०७६ श्रावण २९, बुधबार १५:११ मा प्रकासित
स्कूल बिभागसँगै केही जनसंगठनको इञ्चार्जको बिषयमा सहमति हुन नसकेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार युवा संघ चलाउन योग्यता राख्ने केन्द्रीय सदस्यलाई इञ्चार्ज बनाउने अध्यक्ष ओलीको योजना रहेपनि केही नेताहरुले आपत्ति जनाएको कारण लफडा देखिएको हो । पार्टी स्कुल विभागको नेतृत्वको सकस पनि अझै सुल्झिएको छैन । जनता टाइम्स बाट साभार